koKTH | Sanchaung Journal | Page 2
Tag Archives: koKTH
October 8, 2008 freebird	1 Comment
ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အချစ်ပျယ်သောစကား မကြာခဏကြားနေရသည်။
ဘာမှမမျော်လင့်တော့ဘူး စိတ်ကုန်ပြီ လို လုံ့ လပြေလျော့သောသူတွေ ဒုနဲ့ ဒေးရှိနေကြသည်။
ဘ၀မှာ အဓိပ္ပါယ်မရှိတော့ပါဘူး – ဘ၀ဟာ သေဆုံးသွားပြီလို့ ရေရွက်နေသူတွေ ရှိနေကြသည်။
အချစ်တို့ သည် ဘယ်အချိန်မှာ ပြေလျော့သလဲ။
မျော်လင့်ချက်တို့ဘယ်အခါမှာ ပျောက်ကုန်သလဲ။
ဘ၀သည် ဘယ်အခါမှာ သေဆုံးသွားသလဲ။အဖန်တလဲလဲ စဉ်းစားရင်း ကျွန်တော် အဖြေရှာခဲ့သည်။
. . .နေ့ တစ်နေ့ ၊နေရာတစ်ခုမှာ ကျွန်တော် သိခဲ့ရသည်-
Hope ends; when you stop Believing.
Love ends; when you stop Caring.
တစ်ဖက်သားအပေါ် ဖေးဖကူညီမှုရှိနေသရွေ့မိတ်ဆွေဆိုတာ မရှားပါဘူး။
တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအပေါ် ဂရုစိုက်ခြင်း တည်ရှိနေသရွှေ အချစ်တို့ သည် အဆုံးမသတ်သေးပါ။
ယုံကြည်ချက်တွေ တည်ရှိနေသရွှေ မျော်လင့်ချက်ဆိုတာ မကွယ်ပျောက်ပါ။
မျော်လင့်ချက်တွေရှိနေသေးသရွေ့ဘ၀ဆိုတာ မသေဆုံးပါဘူး။
ဘ၀ ကိုလည်း အဆုံးမသတ်စေနှင့်။
အချစ် ကိုလည်း အဆုံးမသတ်စေနှင့်။
စမ်းချောင်းလေးသည် ဆက်လက်စီးဆင်းရင်း . . . ဒီစာကိုလည်း အဆုံးမသတ်စေနှင့်။
မွန်းလွဲ ၂ နာရီ
September 15, 2008 freebird	1 Comment
“နယ်မြို့ လေးတစ်မြို့ သို့ မွန်းလွဲ ၂း၀၀ နာရီ တိတိတွင် ရထားတစ်စီး အချိန်မှန် ဆိုက်ရောက်မည်” ဟူသော သတင်းကြောင့် မြို့ ပိုင်မင်းသည် အံသြလျှက်ရှိနေသည်။
မြို့ ပိုင်မင်းသည် သူ့ သက်တမ်းတလျှောက် ရထားတစ်စီး အချိန်အတိအကျ ဆိုက်ရောက်သည်ကို တစ်ခါမှ မကြုံဖူးပေ။ ထိုကြောင့် အံသြသွားရုံမက ၀မ်းမြောက်ပျော်ရွှင်လျှက်ရှိနေသည်။ သူသည် ရထား မဆိုက်ခင် ဘူတာရုံသို့ကိုယ်တိုင်ဆင်းသွားကာ ခမ်းခမ်းနားနားကြိုဆိုရန် ပြင်ဆင်တော့သည်။
တစ်ခုတည်းသော ဘင်ခရာဝိုင်းကို ဘူတာရုံသို့ ဆင့်ခေါ်သည်။
အလှဆုံးမိန်းမပျိုဆယ်ဦးကို သစ်လွင်သော အ၀တ်အစားများ ဆင်မြန်းစေကာ ပန်းကုံးများကိုင်ကာ မွန်းလွဲ ၂း၀၀ နာရီ တိတိတွင် ဆိုက်ရောက်လာမည့် ရထားကို စောင့်ကြိုနေသည်။
ရထားက တကယ်ကို ၂း၀၀ နာရီ ဒေါင်ခနဲအမြည်တွင် ဘူတာရုံ ပလက်ဖောင်းသို့ ကျွိခနဲ ဆိုက်ရောက်လာသည်။ စက်ခေါင်းမောင်းသည် ရထားပေါ်မှ ဆင်းလာသောအခါ လှပျိဖြူလေးတစ်ဦးက စက်ခေါင်းမောင်းအား ပန်းကုံးစွပ်လိုက်သည်။ တီးဝိုင်းက အောင်မြင်မှုကို ဖော်ကျူးသော တေးသွားကို တီးခတ်သည်။
သို့ ပေသော်လည်း စက်ခေါင်းမောင်းသူသည် “ဘာတွေ ဖြစ်နေသည်ကို” စဉ်းစားလို့မရဖြစ်နေစဉ်မှာ မြို့ ပိုင်မင်းက “ဂုဏ်ယူပါတယ်ကွယ်” ဟု ပြောရင်းလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်သည်။
စက်ခေါင်းမောင်းသူက “ဘာကို ဂုဏ်ယူတာပါလဲ မြို့ ပိုင်မင်း ခင်ဗျာ” ဟု စည်းကားနေသော ဘူတာရုံ မြင်ကွင်းကို တစ်ချက် ဝေ့၀ဲကာ ကြည့်ရှုပြီး မေးလိုက်သည်။
မြို့ ပိုင်မင်းက “မောင်ရင့်ရထား ဒီဘူတာကို ဘယ်နှနာရီမှာ ၀င်ရမှာလဲကွဲ့ ” ။
စက်ခေါင်းမောင်းသူက “မွန်းလွဲ ၂း၀၀ နာရီပါခင်ဗျာ” ။
မြို့ ပိုင်မင်းက “ အိမ်း အခု မင်းရထားဆိုက်တဲ့ အချိန်ကို ကြည့်လိုက်ပါဦး။
၂း၀၀ နာရီ တိတိ မဟုတ်လား။ အချိန်အတိအကျဆိုက်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ မင်းရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ဂုဏ်ပြုတာပေါ့ကွယ်။”
စက်ခေါင်းမောင်းသူသည် မျက်နှာကြီးဝန်းထိန်လာမည့်အစား ခေါင်းကိုတွင်တွင်ခါယမ်းပြီး
“တစ်ခုခုတော့ မှာယွင်းနေပါပြီ မြို့ ပိုင်မင်း” ဟုပြောလေသည်။
မြို့ ပိုင်မင်းသည် ကော့တက်နေသော နှုတ်ခမ်းမွှေးနှစ်ဖက်ကို လက်ဖြင့် ဟန်ပါပါသပ်ရင်း
“မမှားပါဘူးကွယ်။ အချိန်မှားနေပြီလို့ ထင်လို့ လား၊ ဦးလက်ထဲကနာရီ၊ ဘူတာရုံကနာရီ ပြီးတော့ မင်ရဲ့ လက်ထဲက လက်ပတ်နာရီ အားလုံးဟာ၂ နာရီအတိမှာ ပြနေတယ်လေကွယ်” ။
“မဟုတ်ပါဘူး မြို့ ပိုင်မင်း၊ ကျွန်တော်..ဆိုလိုတာ..က”
“ဦးလည်း အကောင်းဆုံး စီစဉ်ထားပါပဲ။ မောင်ရင် ဘာကို အလိုမကျတာလဲ”
“အစီအစဉ်တွေက အားလုံးကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ၊ မှားနေပြီဆိုတာက… .. .” စက်ခေါင်းမောင်းသူသည် ထစ်ထစ်ငေ့ါငေါ့ဖြစ် ရှေ့ ဆက်မတက်နိုင်သောအခါ
မြို့ ပိုင်မင်းလည်း စိတ်မရှည်သော လေသံဖြင့်-
“ကိုင်း ဒါဆိုလဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောစမ်းပါဦး”
“ဒီလိုပါခင်ဗျာ ကျွန်တော်ရထားက မွန်းလွဲ ၂း၀၀ နာရီ မှာ ဒီဘူတာကို ဆိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အထိတော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ .. ဟို . ဟို ဒီနေ့၂း၀၀ နာရီမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ မနေ့ က ၂း၀၀ နာရီမှာ ဆိုက်ရမှာပါ မြို့ ပိုင်မင်းခင်ဗျာ” ဟု စက်ခေါင်းမောင်းသူ ကဆိုလေသည်။
မှတ်ချက် ။လွန်လေပြီးသောအခါ ကဖြစ်ပါသည်။
September 8, 2008 freebird	1 Comment
ကျွန်တော်တို့အလည်အပတ်ထွက်ကြသည်။
ဘယ်အရပ်သို့ ၊ ဘယ် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထွက်ထွက် အချိန်တန်ရင် အိမ်ပြန်ရမည်။
.. ကျွန်တော်တို့ ကို လုံခြုံမှုကိုပေးသည်။
.. ကျွန်တော်ကို ချစ်သောသူတွေက ကျွန်တော်တို့ ပြန်လာချိန်ကို မျှော်နေကြသည်။
… ကျွန်တော်ကို အပြုံးနဲ့ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုနေသည်။
.. ကျွန်တော် ချစ်သောအရာများစွာ သိမ်းဆည်းထားပါသည်။
… ကျွန်တော် အနားယူသည်။
… ..ကျွန်တော် နှလုံးသားရှိသည်။
… …..ကျွန်တော် ချစ်သောသူများရှိသည်။
ဒီအိမ်မှာ ကြားခွင့်ရခဲ့တယ်…။ ။
နွေးထွေးမှု ပြည့်ဝခဲ့ရတယ်…။ ။
မေမေ့ အပြုံးနဲ့ အိမ်…။ ။
ဖေဖေ့ခွန်အားတွေထဲက အိမ်…။ ။
သားတို့အတွက် အိမ်…။ ။
မလျှော့သော ဇွဲ၊ သွေးမကွဲပဲ
သားတို့အတွက် ဆောက်ခဲ့တဲ့ အိမ်…။ ။
အမြဲမပြတ် သားတို့အတွက် ဂရုစိုက်တဲ့
ဖေဖေနဲ့ မေမေ…။ ။
ဒီကဗျာလေးက ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တည်းက လိုချင်တပ်မက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မိသားစု အိမ် ကလေးပါ…။
ကိုသားဖြိုးရဲ့ အရေးအသား ၊ အယူအဆတွေ လေးစားစွာနဲ့ ကျွန်တော် နှစ်သက်ခုံမင်ခဲ့တယ်။
September 2, 2008 freebird	Leaveacomment
ဘ၀ မှာ ဘာတွေ ပိုင်ဆိုင်နေဖို့ လိုအပ်ပါသလဲ
ဘွဲ့ တွေအများကြိးပိုင်ဆိုင်ထား လိုအပ်ပါသလား
ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ အများကြီးရလိုက်လို့ ဘ၀ဟာ ပြီးပြည့်စုံသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ အများကြီးပေးဆပ်လိုက်ရလို့သာ ဘ၀ဟာ ပိုတန်ဖိုးရှိသွားတာ။
“အကောင်းဆုံး၊အလှဆုံးအရာကို ဖန်တီးခဲ့ပြီးပြီ” ဆိုတဲ့အသိနဲ့ ဘ၀သည် ပို၍နေပျော်သွားခဲ့သည်။
ဘ၀ ဆိုတာ ခဏလေးပါပဲ
လမ်းတစ်နေရာမှာ ဆုံကြတဲ့ ပုရွက်ဆိတ်လေး နှစ်ကောင်လိုပေါ့။
ကိုယ့်ခေါင်းပေါ်က အမွေးနဲ့ အချင်းချင်းထိတွေ့ နှုတ်ဆက်ကြပြီး ဆန်ကျင့်ဖက်ကို လမ်းခွဲလျှောက်ခဲ့ကြတယ်။
ဦးတည်ရာဖက်ကို တစ်ရွေ့ရွေ့ တွားသွားရင်း ကျယ်ပြန့်တဲ့ ဒီဟင်းလင်းပြင်ကြီးမှာ ခန္ဓာကိုယ်သေးငယ်တဲ့ ပုရွက်ဆိတ်နှစ်ကောင် ဘယ်နေရာမှာ ထပ်ပြန်ဆုံခွင့် ရကြမလဲ?
ဘယ်နေရာ ဘယ်အချိန်မှာ ပုရွက်ဆိတ်လေးနှစ်ကောင်အချင်းချင်း ထိတွေ့ခွင့်ရနိုင်မလဲ..?
စကြ၀ဠာနဲ့ နှိုင်းယဉ်ကြည့်ရင် လူဆိုတာ မျက်စိနဲ့တောင် မမြင်နိုင်တဲ့ အမှုန်လေးပါ။
လူ့ဘ၀ထဲ တစ်ခါရောက်လာဖို့ လွယ်ကူပါသလား?
လူချင်းတစ်ခါလောက် ရင်းနှီးနှုတ်ဆက်ဖို့ လွယ်ကူပါသလား?
မောင်နှမလို့အမည်တပ်ဖို့ လွယ်ကူပါသလား?
မိဘလို့အမည်တပ်ဖို့ လွယ်ကူပါသလား?
သူငယ်ချင်းလို့ အမည်တပ်ဖို့ လွယ်ကူပါသလား?
ချစ်သူလို့အမည်တပ်ဖို့ လွယ်ကူပါသလား?
မလွယ်ကူတဲ့ အကြောင်းအရာတွေအကြားမှာ ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေ တွေ့ ခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဆုံခွင့်ရခဲ့တယ်။
ဒီလို တွေ့ တဲ့အခါ ဆုံတဲ့အခါ -ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်ဆံကြမလဲ.
စကားလေး တစ်ခွန်းပါပဲ ….
တရုတ်စကားပုံ တစ်ခုက ဒီလိုပြောပါတယ်။
“ရှေးကံကြောင့် မိုင်ပေါင်းထောင်ချီ ဝေးနေကြသူတွေ တွေ့ဆုံရင်းနှီးခွင့် ရကြတယ်။
ကံမပါရင် ပုခုံးချင်း ရှပ်တိုက်သွားတာတောင် ရင်းနှီးခွင့် မရဘူး” တဲ့…..
ဟုတ်ပါတယ်။ ကံမပါရင် ပခုံးချင်းယှဉ်တိုက်သွားရင်တောင် ရင်းနှီးခွင့်မရပါဘူး။
ကံ အကြောင်းတရားတွေရှိနေလို့ သာ ရင်းနှီးခွင့်ရခဲ့တာပါ..
ရင်းနှီးခွင့်ရတဲ့အခါ စော်ကားခြင်းအမှုကို မပြုဘဲ တန်ဖိုးထားတုန့် ပြန်ရအောင်။
ဒီလိုနဲ့ . . . . .တစ်ယောက်တစ်နေရာဆီသွားရမယ့် အချိန်ရောက်ပြီ်ဆိုရင်-
ဒဏ်ရာမပေးဘဲ ၊ လှပတဲ့ အကြင်နာနဲ့ ၊ ခိုင်မြဲတဲ့ မေတ္တာကိုပဲ လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးရအောင်။
ဒီလိုဆို ဘ၀သည် နေ့ ရက်တိုင်းမှာ လှပနေမှာပါ။
စမ်းချောင်းရဲ့ ဒိုင်ယာရီ, နေထိုင်ခြင်းအနုပညာ
July 7, 2008 freebird	Leaveacomment
ဒီ ကဗျာလေးကို စမ်းချောင်းဂျာနယ်အတွက် ရေးခဲ့တယ်။
ဒီ ကဗျာကို ရေးဖြစ်အောင် အစဖော်ပေးခဲ့တာ ကိုသားဖြိုးရဲ့ “ခရီး” ကဗျာပါပဲ။
ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ ခေါ်ဆောင်မှုမှာ အဓိပ္ပါယ်တွေအများကြီးမြင်တွေ့ ရလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေ ရပ်တန့် နေလို့ မရပါဘူး။
ဘ၀တစ်ခုက သံသရာမှာ မရပ်မနားသွားနေတယ်။
ခရီးတစ်ခုမှာ တစ်ဦးတစ်ယောက်နဲ့ကြုံတွေ့ ရမယ်၊ ဆုံတွေ့ ရမယ်။
ဆုံတွေ့ တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေ ဘယ်လို နှုတ်ဆက်မှာလဲ၊ ဘယ်လို တန်ဖိုးထားမှာလဲ-
ဘ၀ဆိုတာ -တိုက်ပွဲလို့ ကြွေးကြော်ပြီး–
…………….သူတပါးရဲ့မျက်ရည်နဲ့ ပျော်ပါးတဲ့သူတွေ၊ သူတပါးရဲ့ ချွေးနဲ့ ကျေနပ်နေသူတွေ၊ သူတပါးရဲ့ သွေးနဲ့ အောင်မြင်နေသူတွေ တွေ့ ခဲ့ရတယ်။
ဘ၀ဆိုတာ တိုက်ပွဲပဲလား- ကျွန်တော်မေးကြည့်ချင်တယ်။
တိုက်ပွဲလို့ အဖြေရှိခဲ့၇င် – ဒီတိုက်ပွဲမှာ ဘယ်သူက ဘယ်သူကို သတ်မှာလဲ။
တိုက်ပွဲတစ်ခုအတွက် ဘယ်သူတွေ သေဆုံးပေးရမှာလဲ၊ ဘယ်သူတွေ ငိုကြွေးပေးပေးရမှာလဲ၊၊
အဲဒီလို သေဆုံးရမယ့်သူတွေ၊ ငိုကြွေးရမယ့်သူတွေထဲမှာ ကိုယ်ကရော လွတ်မြောက်နိုင်မှာလား။
ကျွန်တော်ကတော့ ဘ၀ဆိုတာ ခရီးတစ်ခုပါပဲ
လာသာ လာပါ ချစ်မိတ်ဆွေရာ။
the best you have and
the best will come back to you.
May 24, 2008 freebird	Leaveacomment
အလုပ်မရှိတော့လည်း အလုပ်မရှိလို့ မျက်နှာငယ်ရ၊ ၀င်ငွေနည်းရ၊ ပူပန်ရ ကြောင့်ကြရနဲ့ ။
အလုပ်ရှိတော့လည်း အလုပ်များလို့ ၊ အလုပ်မပြီးလို့ - စိတ်ပျက်လိုက်တာအလုပ်မသွားချင်တော့ဘူး။
သူဌေး ကြောင့် ၊ လစာကြောင့်၊ လုပ်ငန်းခွင် သာယာမှုမရှိလို့ စိတ်ညစ်ရတာ။
သဌေးလည်းသူ့ အလုပ်အတွက် ကားအကောင်းစားကြီးစားပြီး ပမာဏကြီးစွာစိတ်ပူရတာ။
အလုပ်ဆိုတာ ရှိလည်းမကောင်း၊ မရှိလည်းမကောင်းလို့ ပြောင်းလဲပြီး သတ်မှတ်ရတော့မှာလား။
လက်ရှိအလုပ်က မကောင်းဘူး၊ လက်ရှိအလုပ်မှာမပျော်ဘူးဆိုရင် သင်ဘာလုပ်မလဲ၊
ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အလုပ်၊ စိတ်ဖိစီးမှုနည်းသော အလုပ်ကို ကျွန်တော်တို့ မလိုချင်ဘူးလား။
ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အလုပ်၊ စိတ်ဖိစီးမှုနည်းသော အလုပ်ဆီကို မသွားချင်ဘူးလား။
အလုပ်ရှင်တို့ ပုဂ္ဂလိက အပြုအမှုတွေကို ဘေးဖယ်ပြီး ၊ အလုပ် သဘော၊သဘာဝ အရ သက်တောင့်သက်သာရှိသော အလုပ်ကို စစ်တမ်းကောက် လေ့လာကြည့်ရအောင်-
တွေ့ ရှိချက် ကတော့ အလုပ်အမျိုးအစား ၇ မျိုးကို ရွေးချယ်ပေးထားတယ်။ ၀င်ငွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ လုပ်ငန်ခွင်အနေအထား အားလုံးကို ချိန်ဆတွက်ချက်ထားတာပါ။
ဒီရွေးချယ်မှုဟာ လက်ရှိ မြန်မာပြည်အနေအထားနဲ့အံဝင်ဂွင်ကျမှုမရှိပေမယ့်၊ နောက်တစ်ချိန်မှာ မြန်မာပြည်ကြီး ခေတ်မီတိုးတက်လာတဲ့အခါ ကမ္ဘာကြီးနဲ့ ရင်ပေါင်တန်းလာတဲ့ အချိန်မှာ မြန်မာလူမျိုးတွေ ဗဟုသုတအပြည့်နဲ့ မိမိရဲ့ အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကောင်းမွန်စွာ
ရွေးချယ်တတ်စေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ဒီဆောင်းပါးကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
အမှတ်စဉ် (၁) Accountant စာရင်းကိုင်အလုပ်တွေ
စာရင်းဇယားဆိုတာ ရိုးသားမှုသာရှိရင် အမှားအယွင်းနည်းသောအလုပ်ပါတဲ့။
သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပုံစံအတိုင်းသာ ရေးသားစာရင်းသွင်းမည်ဆိုရင် မည်သူကမျှ
အထွန့် တက်လို့မရပါဘူး။ အထွန့် တက်ချင်ရင် ၊ပြုပြင်ပြောင်းလဲချင်ရင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို တရားဝင်ပြောင်းပါ ကျွန်တော်၊ကျွန်မကို ဟိုဟာ၊ဒီဟာ မပြင်ခိုင်းပါနဲ့ လို့ ကာကွယ်ပြောဆိုလို့ ရတယ်။
အမှတ်စဉ် (၂) မူလတန်းကြိုဆရာတွေ
အလယ်တန်း၊အထက်တန်းဆရာတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လျှင် မူကြိုဆရာတွေ အတွက် လေးလံသော ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးမရှိဘူးလို့ ဆိုကြတယ်။ အနီးစပ်ဆုံးဥပမာကတော့ စာမေးပွဲစစ်ပေးရတာ၊ အတန်းတင်ပေးရတာတွေအတွက် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးမရှိဘူးပေါ့။ ကလေးအချင်းချင်းရန်ဖြစ်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်း၊ မိဘမသိဘဲ ကျောင်းပြေးတဲ့ ရာခိုင်နှုန်း၊ စာမလိုက်နိုင်လို့မိဘကိုခေါ်ယူအကြံပေးရတဲ့ ရာခိုင်နှုန်း အရမ်းနည်းပါတယ်။ ကလေးတွေ အတွက် အခြေခံ အကျဆုံးဖြစ်တဲ့ သီချင်းဆိုတတ်အောင် ၊ ပုံဆွဲတတ်အောင်၊ အခြေခံပေါင်းတာနှုတ်တာ၊ မြန်မာစာ အက္ခရာနှင့် သူတို့ ၏ အဓိပ္ပါယ်၊ English အက္ခရာ သူတို့ ၏ အဓိပ္ပါယ်တွေကို နေ့ စဉ်သင်ရင်း ရိုးသားသော အပြစ်ကင်းသော ကလေးများအကြားမှာ မိမိသည်လည်း အမြဲရိုးသားပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မယ်။
အမှတ်စဉ် (၃) Nursing Assistant သူနာပြုအကူတွေ
ဆရာဝန်တွေလို ဆေးပညာတွေကို ခက်ခဲစွာမသင်ရပါဘူး။ ဆရာဝန်တွေရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လူနာတွေကို စိတ်ရှည်စွာ ကူညီစောင့်ရှောက်နိုင်ရင်၊ လူနာကလည်းကျေးဇူးတင် မိမိရဲ့တာဝန်လည်းကျေပွန်ပါတယ်။
အမှတ်စဉ် (၄) Financial Planner ငွေကြေးစီမံခန်ခွဲပေးရသူတွေ
သင့်မှာ ၀င်ငွေတွေများလာရင် အခွန်ဆောင်ရဖို့ ၊ ဒီငွေတွေအလုံးအထည်မပျက်ဘဲရှိဖို့ ၊ ဒါအပြင်တိုးပွားလာဖို့ .. အတွက် သင် အတော်စိတ်ပူရမှာပဲ။
ဒီတော့သင် ဘာလုပ်သလဲ….ငွေကြေးစီမံခန်ခွဲပေးရသူတွေနဲ့ တွေ့ ရမှာပေါ့။
သူတို့ တွေက အခွန်ဥပဒေတွေ၊ လက်ရှိဈေးကွက်ရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေ၊ ဘဏ်တွေရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို ကိုးကားပြီး သင့်ငွေကို ချွေးမထွက်ဘဲ စားပွဲပေါ်မှာတင် စီမံခန့် ခွဲပေးတယ်။ ပြီးတော့ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကော်မရှင်ယူပါတယ်။ သင့်ဆီမှာ ငွေများများရှိရင်သူတို့ တွေကို ငွေများများပေးရတယ်။
အမှတ်စဉ် (၅) Massage Therapist / Physical Therapy Assistant အရိုးအကြောပညာရှင်တွေ
ပညာတတ်သူတွေက နေ့ စဉ် ခါးချိအောင် ထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတယ်။ ပညာမတတ်တဲသူတွေက
နေ့ စဉ် နေပူ၊မိုးရွာ မှာ ခြေတိုအောင် မနားမနေအလုပ်လုပ်ရတယ်။ ဒီတော့သင်တို့ အားလုံးရဲ့ အရိုးအကြောတွေ ခံနိုင်ပါအုံးမလား။ ယခုခေတ် နေထိုင်မှုစနစ်ကလည်း TV ကိုတောင် လမ်းလျှေက်ပြီးပိတ်စရာတော့ဘူးလေ။ ဒီတော့ လူတွေရဲ့ အရိုးအကြောတွေ ဆိုင်းရောပေါ့။ ခေတ်မီလေ အရိုးအကြောတွေ ဆိုင်းလေပါပဲ။ အရိုးအကြောပညာရှင်တွေ ၀င်ငွေတိုးလေပေါ့။
အမှတ်စဉ် (၆) Graphic Design
မိမိစိတ်ကူးကို ကွန်ပျုတာနဲ့ ကွန့် မြုးပြီး အလုပ်အပ်သူတွေကို ကျေနပ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိသူတွေပေါ့။
အလုပ်ရှင်တွေက ဟိုဟာ၊ဒီဟာ အရစ်မရှည်ဘူး သူတို့ တွေကို စိတ်တိုင်းကျ ဖန်တီးခွင့်ပေးထားပါတယ်။ ၀င်ငွေလည်းကောင်းပါတယ်။
အမှတ်စဉ် (၇) Desktop Support ကွန်ပျုတာ ဒေါက်တာလေးတွေ
သူတို့ တွေက ကွန်ပျုတာ ကျွမ်းကျင်တယ် ၊နှံ့ စပ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ကွန်ပျုတာနဲ့ ပတ်သတ်ရင် ဘာမှ မတီထွင်ပါဘူး၊ဒီတော့ ခေါင်းမစားဘူး။ ကွန်ပျုတာ သုံးစွဲသူတွေကို အကူအညီပေးတယ်။
သူတို့ မကူညီနိုင်တဲ့ အခက်အခဲရှိရင် တီထွင်တဲ့သူတွေကို အပြစ်တင်ပြီး ကွန်ပျုတာ သုံးစွဲသူတွေဆီက အကြံညဏ်ပေးခ၊ လုပ်အားခယူပါတယ်။
Internet တွင် ဖတ်မိသော ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ကိုးကားထားပါတယ်။
အလုပ်ခွင်အသီးသီးရှိ သူငယ်ချင်းများကို အမှတ်တရနှင့် အပြုသဘောဆောင်လို့ရေးသားခဲ့တာပါ။
March 20, 2008 freebird	Leaveacomment
ချစ်ခြင်းအနုပညာ(၁) သို့ 
“ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ အလှဆုံးသူတစ်ယောက်” ဆိုတာ
Continue reading အချစ်သည် “ရှင်သန်စေတဲ့ဆေး” →
February 24, 2008 freebird	1 Comment
တိုး ရင်း ပေါင်း
“မမှားသော ရှေ့ နေ
February 14, 2008 admin	1 Comment
ညဉ့်ယံလွမ်းချင်း သီဆိုကျူးရင့် …
မှော်အတတ်ဖြင့် နေ့သစ်မွေးဖွား …
ချစ်ခြင်းတို့ဖြင့် ပြီးပြည့်စုံစေ …
ထာဝရရင်တွင်း တည်နေမင်း …
ချစ်ခြင်းတို့ဖြင့် ပြည့်စေမင်း …
ကဗျာအဖြစ် ဖွဲ့ ဆိုပေးသော သူငယ်ချင်း သိမ့် အား ကျေးဇူးတင်လျှက်
February 13, 2008 freebird	Leaveacomment
“ ပကတိရိုးရှင်းစွာရှိသော စိတ်ခံစားမှု
တို့ ကို အတတ်ပညာတစ်ခုဖြင့်
ဖန်တီးဖော်ပြခြင်း ” ဟုနားလည်ထားပါသည်။
# ဖန်တီးမှု တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါပဲ
ချစ်တယ် ဟု သက်သေထူလျှင်
# “သူ့ ကိုချစ်ရမလား” လို့ 
မေးခွန်းထုတ်ဖို့ တော့ မသင့်ပါဘူး။
မေးခွန်းထုတ်ဖို့မလိုဘဲ